Ny tafan’ny mpamaham-bolongana tamin’ny fifampitifirana sy ny fanovana governemanta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Mey 2010 23:04 GMT
Nisy fifampitifirana nampandriaka ny ra teo amin'ny FIGN izay sangan'ny avy amin'ny zandary mpampandry ny fahalemana miisa 21 sy avy amin'ny mpitandro ny filaminana manoa ny fitondrana mivondrona ao amin'ny EMMOREG. Hoy ny tatitry ny Voice of America hoe:
“Officaials in Madagascar's capital say one person was killed and five others wounded when rival security forces exchanged gunfire Thursday.
Navoaka ofisialy teto an-drenivohitr'i Madagasikara fa olona iray no maty ary dimy hafa no naratra nandritra ny fifampitifirana teo amin'ny samy hery mitam-piadiana nifandrafy tamin'ny alakamisy.
Ny vavolombelona nanatri-maso nilaza fa nipoaka ny fifampitifirana rehefa nifanatrika tamin'ny tafika sy ny herin'ny zandary ireo sangany lazaina fa manohitra ny fihoaram-pahefan'ny lehibeny.
Nilaza ny kolonely avy amin'ny zandary fa 21 ny isan'ireo tafiditra amin'ity fisintahana ity sy mamahatra ao amin'ny tobiny. Nolazainy moa fa avy amin'ny zandary ilay maty.
Ny tanjon'ny FIGN moa dia ny hiaro ny famoriana ireo mpanohitra an-dRajoelina, izay atrehin'ny HMF (Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana). Ny andro mialoha ny fifampitifirana manko dia niantso ny olona hanatrika ny fivoriana ny FIGN ary nilaza izy ireo fa hiaro ny mpanao fihetsiketsehana.
Nanatrika izany i Citoyenne Malgache :
“Nojerena ny fivezivezen'ny fiara ary nohenoina ny fifampitifirana. Hita ny fiverenan'ny fiaran'ny FIS (nanao tifi-danitra ho fampihorohoroana) niaraka tamina fiara tsy mataho-dalana iray sy fiara mpamonjy voina, ary nananika indray an'Antanimora. Tsy nitovy tamin'ilay an'ny vokovoko mena teo fa niakatra hatrany amin'ny sakana voalohany ity fiara mpamonjy voina ity (Misy debadeba halaina haingana angaha? Sao dia i Lylison ? Naotin'ny mpanoratra : iray amin'ny mpitarika ny FIS i Lylison dia nidina indray niaraka tamin'ilay fiara tsy mataho-dalana.
Hatreo amin'ny toerana nitazananay no nahitanay ilay 4×4 nijanona teo amin'ny sampanan-dalana sy ny fidinan'ireo miaramila tao niaraka tamin'ny fitaovam-piadiany manempotra…hanaparitahana ny olona, satria mety matahotra toraka biriky mihitsy angamba izy ireo. Tsy fantatro hoe tahaka ny ahoana moa izahay hatreo amin'ny toerana nijerenay fa nokendren-dry zalahy izahay!
Teo anilanay no nianjeran'ilay baomba, teo andavarangan'ny trano izay mety ho tsy nampoizin'ny mimpetraka tao izany hifonoka setroka izany. (tsy amoron'arabe akory io trano io). “
Nitatitra io raharaha io Avylavitra sy i Jentilisa izay vao tonga vao haingana avy tamin'ny Vovonan'ny Global Voices tany Santiago.
Jentilisa nieritreritra fa tsy tafa ilay fikomiana.
Avylavitra naka sary.
Hatry ny ela no nikotrika tao ity adin'ny samy hery mitam-piadiana ity. Hitan'ny tao amin'ny FIGN fa tsy mifankahazo amin'ny Fitondrana Avon'ny Tetezamitan'i Andry Rajoelina izy ireo. Andry Rajoelina izay hita ho mitondra ny fitantanam-panjakana amin'izao fotoana izao, nahazo ny fahefana tamin'ny herintaona, taorian'ny fanonganam-panjakana nataony, tohanan'ny FIS , nandresy ny naharoaka ny filoha voafidy Marc Ravalomanana hiala ny tanindrazana. Ny notakian'ny FIGN moa dia ny nanjavonan'ny 500 000 000 ariary, izany nomen'i Marc Ravalomanana. Nolazain'izy ireo moa fa tsy nozaraina mihitsy io vola io. Ny loharanom-pifandirana hafa koa moa dia ny famoretana ataon'ny FAT ny fihetsiketsehana an-dalambe rehetra ankoatra ny any amin'ny fitobian'ny fiara sy anatin'ny faritry ny fivarotan-d Ravalomanana norobaina sy nopotehina.
Ny fandresen-dahatry ny vondrona nioko dia ny tsy nizarana ilay vola 500 000 000 ariary avy amin-dRavalomanana natokana ho an'ny tobiny tamin'ny 2009. Notakian'izy ireo ihany koa ny hanoloana ny governemanta ho “komity miaramila” izay misokatra amin'ny antoko politika rehetra.
Nampanantenaina moa ny hanadihadiana ny niafaran'io vola 500 000 000 ariary io saingy tsy hita ny niafarany.
Ho an'ny mpamaham-bolongana Ndimby moa dia lalina kokoa ny anton'ny fisarahana teo amin'ny vondro-tafika nifanandrina :
Ny Paik'adin'i Didier Ratsiraka, ny tsy fahalalan'i Marc Ravalomanana ny resaka miaramila, ary izany rehetra izany nofaranan'ny paikady fanozongozonan-d Rajoelina hahafahany mamaly ny nofinofiny : tsy ilaina intsony ny hitsakotsako indray izany rehetra izany…Manoloana ny fandemena ny tafika tanatin'ny taompolo vitsivitsy nanaovan'ny mpanao politika fitantanana ‘tandrametaka’ azy, no nampidiran-dRajoelina tao amin'ny miaramila sasany ny voa ota sy fady : fampinoana ny manamboninahitra sy ny miaramila fa azo atao ny mandà baiko fa manao izay saim-pantany fotsiny, dia mody lazaina hoe mandray ny andraikiny; ny fampianarana ny tontolo politika fa tsy vitan'ny hoe azo atao ny manodikodina ny lohan'ny vondrona miaramila hanohana tolona politika iray fa hahazoana tombony ihany koa. Eo anatrehan'izay sehatra izay, mbola ny fifampifehezana ve no ivon'ny tanjaky ny tafika amin'izao fotoana izao? Moa nitandro ny filaminana sa ny fikorontanana ny ny hery mitam-piadiana tanatin'izay herintaona izay? Ahoana ny hanazavana ireo heloka fandikan-dalàna ataon'ny miaramila sasantsasany? Ahoana moa ilay FIS manana ny laza ratsiny, tsy manana fisiana araka ny lalàna hatramin'izao fotoana izao araka ny fiaiken'ny lehibeny teo aloha ny lietnà kolonely Charles Randrianasoavina, no mbola tsy noravana nefa ny sasany amin'ireo ao anatiny dia tafiditra anatina raharaha maizina sy hafahafa raha hoe mba mpitandro ny filaminana ihany? Avy amin'inona moa no ahazoan'ny sivily Alain Ramaroson mandehandeha miaraka amina miaramila maro tahaka izao eo ambany fahefany?
Efa nampoizina ihany izao fifanandrinana eo amin'ny mpitondra fivavahana sy ny tafika izao. Nikarakara ny fiangonana protestanta nandritra ny fotoana nitondrany ilay protestanta Ravalomanana ary maro no nahatsapa izay tombondahiny izay, mijery fa voahosihosy ny fisarahan'ny Fanjakana sy ny Fiangonana. Tsy misy fanaingoana tsara indrindra ankoatra firohotan'ny olona izay nahatalanjona teo anilan'ny tobin'ny FIGN raha nanomboka ny fifampitifirana, sy ny horakoraky ny olona nanohana tao andamosina.
Mbola tsy manjavozavo moa hatramin'izao ny fiantraikan'ny fifampitifirana teo amin'ny fidirana faharoan'ny fifampiraharahana hatao any Pretoria. Tsy nandany fotoana moa ny mpaohana an-dRajoelina nanondro an-dRavalomanana :
“The events witnessed in the capital are proof of former president Marc Ravalomanana's desire to escalate the situation,” said a statement issued by Rajoelina's office. ”Marc Ravalomanana is attempting to sow civil strife,” the statement said.
“Porofo indray iny toe-javatra hita teto Antananarivo iny fa te-hanasarotra ny toe-draharaha ny filoha teo aloha Ravalomanana”, hoy ny filazana ofisiany avy amin'ny biraon-dRajoelina. “Te-hanao ady an-trano i Marc Ravalomanana”, hoy ny fanambarana.
Tsy afa-bela ihany koa ny filoha Mozambikana teo aloha, Joachim Chissano, izay mpanamora ny fifampidinihana (saiky hatao ao) Pretoria :
Ampangain'ny avy amin'ny biraon-dRajoelina ho miaro ny tombontsoan-dRavalomanana ihany koa ny mpitarika ny fanelanelanana amin'ity krizin'i Madagasikara ity, dia ny filoha Mozambikana Joaquim Chissano.
Maro moa ny fanelanelanana nandamoka saingy nanolo-kevitra ny hisian'ny fifampidihana any Pretoria eo amin-dRajoelina, Ravalomanana ary ireo filoha roa teo aloha i Chissano.
Efa nanambara ny fahavononany hanohy indray ny fifampidinihana Ravalomanana fa tsy nivily, miampanga an'i Chissano ho “mitsabaka” amin'ny raharaha anatin'ny nosy ny fanambarana navoakan'ny biraon'i Rajoelina.
Telo andro taty aorian'ny fifampitifirana, nandrava ny governemanta indray i Andry Rajoelina ary nanangana hafa vaovao, ary miaramila no misahana ny sehatra sasany.
Nanitsy ny governemantany indray i Andry Rajoelina, deban'i Madagasikara, tamin'ny alatsinainy, nanampy miaramila dimy hafa indray, tao anatin'izay krizy politika nosedrain'ity nosy ao amin'ny Riakan'ny Indiana ity.
Nanendry Jeneraly hitarika ny tafika sy ny zandarimaria (ary polisy) i Rajoelinan izay nandrombaka ny fahefana ary notohanan'ny tafika tamin'ny marsa 2009., ary miaramila ihany koa no misahana ny fahasalamana, ny fanjonoana ary ny tontolo iainana.
Mbola ny Praiminisitra Camille Vital, jeneraly misotro ronono, ihany no lehiben'ny governemanta.
lasibatra tamin'ity fifandonana ity ihany koa ny fahalalaham-pitenenana. Efa mahazatra nandritra ity krizy ity ny fanakatonana radio syny fanenjehana mpanao gazety.
Tsy nanivaka tamin'izany ny tamin'ny zoma : nakatona ny Radio Fahazavana izay manakaiky kokoa an-dRavalomanana ary fananan'ny Fiangonana protestanta Reforme. Nosamborina ny mpanao gazetin'ny Radio Fahazavana. Herinandro mialoha izany dia notafihan'olona manao fanamiana sivily ankitsirano ny Radio Frequence Plus ary nosamborina ny mpitarika ny mpanohitra niresadresaka nandritra io fotoana io ary mbola any amponja moa hatramin'izao. Nisy nanafika ihany koa ny biraon'ny La Gazette de la Grande Ile.
Manohitra ireny fihetsika ireny ny Vaomiera miaro ny mpanao gazety :
“Melohinay io fanafihana misetrasetra ny biraon'ny Fréquence Plus,” hoy ny mpandrindra ny fandaharan'asa eto Afrika Tom Rhodes. “hatramin'ny ela no niharan'ny antsojain'ny ady politika ny mpanao gazety malagasy. Tokony hhariharin'ny fitondrana izay tao ambadik'iny fanafihana iny ary tokony honerany ny simba rehetra ”
Nampanatenaina indray ny hanaovana ny fanadihadiana ary nangatahina ny fanazavana.
Niaina tao anatin'ny fikorontanana sy ny aizina ny mponina'Antananarivo hatramin'ny Desambra 2008. Araka ny ijoroan'i Mpakavato:
Efa niakatra moa ny isan'ny maty taty aoriana. Ao anatin'izany i Yvon Ranaivo Arison, mpitandrina ao amin'ny fiangonana reforme (FJKM) izay tsy mazava loatra ny fomba nitifirana azy (nolazaina fa notifirina avy an-damosina), ary nalevina tamin'ny 25 May, ka nahavory olona maro. Namoaka andian-tsary tamin'izany i Jentilisa .